San Htun's Diary: ဖီလင် ၃၂...
New York Botanical Garden, Bronx (ဘရောင်းစ်လို့ အသံထွက်ပါတယ်)
ဖီလင် ၃၁ ရေးပြီးတာ မကြာသေးဘူး ဖီလင် ၃၂ ရေးနေရပြီ။ တစ်နှစ်ဆိုတာ ခဏလေးပါလား အချိန်ကုန်တာ မြန်လိုက်တာ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက မွေးနေ့ ကိတ်လှီးပြီး ဖယောင်းတိုင် မှုတ်ခဲ့ရသူ မဟုတ်လေတော့ မွေးနေ့ ကိတ် လှီးရမှာကို ဖီးလ်သိပ်မလာဘူးရယ်။ မွေးနေ့ ကိတ် လှီးရမှာထက် မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ ဝိုင်းဖွဲ့ စားသောက်ရတာကို ပိုနှစ်သက်တယ်။ ကိုယ့်မွေးနေ့ က ကျေးဇူးတော်နေ့ နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတတ်တာ ဒီနှစ်မှာ တော့ မွေးနေ့ က စောနေတယ်။ ၂၀၁၁ တုန်းက ယန်းဇီပေးတဲ့ ကိတ်မုန့် သေးသေးလေးက ကိုယ့်ဘဝရဲ့ပထမဆုံး မွေးနေ့ ကိတ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ကျေးဇူးတော်နေ့ ပိတ်ရက် ဆူနမ်ရှိတဲ့ အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမြို့ ကို ရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို ဆူနမ်က မွေးနေ့ ကိတ် တဝက်သာသာ ကိတ်မုန့် လေးတွေဝယ် ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ဘော့စတွန်မှာနေတဲ့ ရာမားက စကိုက်ဗွီဒီယိုကနေ ဆူနမ်နဲ့ အတူတူ ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး ဆိုပေးတဲ့ ၂၀၁၂ မွေးနေ့ ကတော့ ပထမဆုံး ဖယောင်းတိုင်မှုတ်ရတဲ့ မွေးနေ့ ဆိုပါတော့။
ဆူနမ်တို့ နဲ့မွေးနေ့ ညစာ စားမလို့ ဖုန်းခ်ါတာလည်း မကိုင်၊ အိမ်ကို သွားတော့လည်း မတွေ့ ။ အိမ်ရှင်မ ရှယ်ရွန်ကို ပီဇာဝယ်ကျွှေးတော့ သူက ဝိုင်နီတွေထုတ်ပြီး ဖန်ခွက်ချင်းတေ့ ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးလုပ်တယ်။ အဲဒီနေ့ က ဆူနမ်နဲ့ အမ်းထရူးက ရာမားက နီပေါကနေ ပြန်လာမှာမို့လေယာဉ်ကွင်းမှာ သွားစောင့်နေတာ လေယာဉ်က ဒီလေးဖြစ်လို့၆ နာရီလောက် စောင့်နေရတယ်တဲ့အပြင် ကိုယ့်မွေးနေ့ ဆိုတာလည်း မသိပါဘူးတဲ့။ နောက်ဆို မွေးနေ့ မတိုင်မှီ သုံးရက်အလိုမှာ ကြိုပြောတဲ့။ အစိုးရရှပ်ဒေါင်းဖြစ်လို့ရုံးပိတ်ပြီးကတည်းက ပြန်မဖွင့်တော့လို့လေးအော့ဖ်ထိ၊ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကိုယ့်မွေးနေ့ ကို မသိတဲ့ ၂၀၁၃ မွေးနေ့ ကတော့ အဆိုးဆုံးပါပဲ။ ၂၀၁၄ မွေးနေ့ က တနင်္လာနေ့ ကျရောက်တာမို့တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး ဝထ္ထုငွေသွားကပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ မွေးနေ့ ဆွမ်း ကပ်ချင်ပေမဲ့ ထမင်းဆိုင်ကနေ ဟင်းမှာစားနေသူမို့ချက်ပြုတ်ဖို့တကယ်ပျင်းတယ်။ ဆွမ်းချက်မယ်ဆိုရင် ဝယ်ဖို့ ခြမ်းဖို့ချက်ဖို့ ပြုတ်ဖို့ အတွက် ပိတ်ရက်တွေမှာ လုပ်နေကျ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းအမှု ဖျက်ရမှာကိုလည်း မဖျက်ချင်။
ကိုယ့်မွေးစားအမေက ဖုန်းဆက်လာပါတယ် တနင်္ဂနွေနေ့ဘယ်အချိန်အားလဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အရုဏ်ဆွမ်းသွားကပ်ပြီး အပြန် ကိုယ့်ကို အစားအသောက်တွေ ပေးမလို့ တဲ့။ ဘတ်စ်ကားနဲ့နယူးယောက်ကို မနက်ဖက်သွား မေရီလန်းကို ညနေပြန် ဖေ့စ်တူဖေ့စ် အင်တာဗျူးပြီး မကြာခင် နှစ်ပတ်အကြာ ရုံးတက်နိုင်မလားဆိုပြီး နယူးယောက်အလုပ်က အော်ဖာကမ်းလာတော့ နယူးယောက်မှာ အိမ်ခန်း အသည်းအသန် ရှာရဖို့ဖန်လာတယ်။ နယူးယောက်မှာ အသိဘယ်သူတွေရှိလဲ လုပ်ပါဦးဟ ကူညီကြပါဦးဟ။ နယူးဂျာဆီမှာနေတဲ့ ဘလော့ဂါမမီးငယ်ဆီကိုလည်း ဖုန်းလှမ်းဆက် အကူအညီတောင်း အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါ။ မကေခိုင်မိတ်ဆွေ ကိုဝင်းငယ်အစ်မ နယူးယောက်မှာရှိတယ် သူ ကူညီပေးလိမ့်မယ်တဲ့။ အဲဒီအစ်မနဲ့ဖုန်းခဏပဲ ပြောဖြစ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်လည်း မေရီလန်းကနေ ပြောင်းဖို့ ရွှေ့ ဖို့ ပြင်ဆင်၊ ကားကိုရောင်းလိုက်တော့ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ကနေ မေရီလန်းပြည်နယ်ကို ပြောင်းလာသလို ပစ္စည်းတွေကို ကားထဲအကုန် ပစ်ထည့်ပြီး ပြောင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ ပေးသင့်တာတွေပေး၊ ပစ်သင့်တာတွေပစ်၊ အရေးမကြီးတာတွေကို စာတိုက်ကနေပို့ ၊ အရေးကြီးတာတွေကို ကိုယ်နဲ့တပါတည်းသယ်။
နယူးယောက်ဘတ်စ်ကားဂိတ် ပို့ အသော်ရတီကနေ တက္ကစီငှားပြီး တိုက်ရှေ့ ရောက်တော့ ကိုယ့်အိမ်ရှင်တွေက အလုပ်ကနေ ပြန်မရောက်သေးဘူး။ ကိုဝင်းငယ်က စောင့်ရှောက်လိုက်ပါဆိုတာနဲ့မြင်လည်းမမြင်ဘူး သိလည်းမသိကျွှမ်းတဲ့ ကိုယ်အတွက် အိမ်ခန်းတွေကို လိုက်ကြည့်ပြီး ရှာပေးထားတဲ့ အစ်မနဲ့အဲဒီတော့မှပဲ ဆုံဖြစ်ကြတယ်။ ညနေစာကို သူ့ အိမ်မှာပဲစား ကိုယ်နေတာကလည်း အဲဒီအစ်မရဲ့အိမ်ရှေ့ တိုက်ဆိုတော့ ပိတ်ရက်တွေဆို အဲဒီအစ်မအိမ်မှာ မုန့် ဟင်းခါးချက်ရင် မနက် ၁၀ နာရီ အိပ်ယာက နိုးတာနဲ့သွားစားတော့တာပဲ။ အဲဒီတုန်းက ရာသီဥတုကလည်းအေး၊ အလုပ်ကလည်း တအားပင်ပန်းတော့ ပိတ်ရက်တွေဆို အပြင်သွားဖို့ ထက် အိပ်နေတော့တာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ စတင်သိကျွှမ်းခဲ့ရတဲ့ အစ်မက ကိုယ့်ကို မွေးစားသမီးတစ်ယောက်ရတယ်လို့မှတ်ယူပြီး ကိုယ်ကလည်း မွေးစားအမေ (အိုမား) ရတယ်လို့မှတ်ယူတယ်။ အချက်အပြူတ်မကျွှမ်းတဲ့ ကိုယ်ကလည်း အချက်အပြုတ်ကောင်းတဲ့ အိုမားဖိတ်ခေါ်ရင် ငတ်သမျှ အတိုးချပြီး စားတတ်တယ်။ ခင်ရာဆွေမျိုး မြိန်ရာဟင်းကောင်းလို့ဆိုကြတဲ့ ဘဝကြီးမှာ ကိုယ့်အတွက်တော့ အိုမားတို့ အိမ်က စားအိမ်သောက်အိမ် ဆွေမျိုးရင်းချာအိမ်လို့ခံယူထားတယ်။
အိုမားက မနက်အရုဏ်ဆွမ်းကို အနီးအနားက သုံးပါးကျောင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ကျောင်းမှာ သွားကပ်မှာဆိုတော့ ကိုယ်ကလည်း လုိုက်ချင်တယ် မွေးနေ့ ဝထ္ထုငွေ ကပ်ချင်လို့ ။ မနက် ၆ နာရီ အိုမားက ဝင်ခေါ်ပြီး မနက်အရုဏ်ဆွမ်းအဖြစ် ကြက်သား၊ ပလာတာ၊ အချိုပွဲအဖြစ် မန္တလေးပဲကြော်၊ ပြောင်းဖူးကြော်၊ ပန်းသီး ကပ်ကြတယ်။ မနက်အစောကြီး ထရလို့အိပ်ငိုက်နေတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဖအေတူသမီး ငယ်လေး၊ အိုမားနဲ့ တူလို့ချောမောတဲ့ အကြီးမလေး နှင်းနှင်းနဲ့စကားတွေ ပြောတော့မှ နှင်းနှင်းမွေးနေ့ အလှုမှန်း သိရတယ် ကိုယ့်မွေးနေ့ က မနက်ဖြန်။ အရုဏ်ဆွမ်း ဘုဉ်းပေးပြီးတဲ့ ဆရာတော်တွေကို ဝထ္ထုငွေ၊ သင်္ကန်းကပ်တော့ ဆရာတော်က သီလပေး၊ မွေးနေ့ မင်္ဂလာတရားဟော၊ ပြုသမျှကုသိုလ်တွေကို ရေစက်အမျှဝေတော့ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရတယ်။ ကို်ယ်စိတ်ကူးထားတဲ့ မွေးနေ့ အလှုလေးပါပဲ။ မနှစ်ကနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒီနှစ်က ကျေနပ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ အလုပ်က ပင်ပန်း၊ စိတ်ဖိစီး၊ ဘီးစီးတော့ အရင်လို လေးအော့ဖ်မှာ မပူရဘူး။
မေရီလန်းအိမ်နားက မက်သရူးဟန်ဆန်ထရေးလမ်းလေးကိုတော့ သတိရမိတယ်။ အဲဒီထရေးလမ်းလေးမှာ လမ်းလျှောက်ရင်း စိမ်းစိမ်းစိုစို သစ်ရွက်ကလေးတွေ အရောင်ပြောင်းလာတာ၊ တစ်ပတ်နှစ်ခါ၊ ပိတ်ရက်တွေဆိုရင် မနက်တိုင်း အပြေးသွားလေ့ကျင့်ရတာကို တမ်းတမိတယ်။ နယူးယောက်ရောက်ပြီးကတည်းက အပြေးလေ့မကျင့်တော့တာပါပဲ။ နယူးယောက် ရုံးတက်ရုံးချိန်တွေမှာ တစ်နေ့ ကို အနည်းဆုံး နာရီဝက်ကျော် လမ်းလျှောက်ရတယ်။ ပိတ်ရက်တွေမှာ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ နဲ့အနည်းဆုံး ၄ မိုင် လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ စိတ်တူကိုယ်တူ ဝါသနာတူတဲ့ ဝိုင်းလို သူငယ်ချင်းရတော့ ခရီးတွေ အတူတူသွား၊ တောင်သွားတက်၊ ပိတ်ရက်တွေဆို ဓာတ်ပုံတွေ သွားရိုက်ဖြစ်တယ်။ ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်းဖန်၊ အမ်းထရူးတို့ နဲ့အဆက်အသွယ် မရှိတော့တာ နယူးယောက် ပြောင်းပြီးကတည်းက။ တိုင်ပင်စရာ ကိစ္စရှိမှ အီးမေးလ်ပို့ ဖြစ်တော့တယ်။ ဂီတာတီး မသင်ဖြစ်တာလည်း ကြာပြီ။ အိမ်ရှင်တွေထက် မိုချီ၊ နတ်စုတို့ နဲ့ ပိုရင်းနှီးလာတယ်။ အရင်လို ခပ်တည်တည် နှုတ်နည်းတဲ့သူ မဟုတ်တော့ဘဲ လူတိုင်းကို ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်တတ်လာပြီ။
ယူအက်စ်ရောက်ပြီး မကြာခင် ဂျူလှိုင်မှာဖွင့်တဲ့အတန်းကို စောင့်ဖို့အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ဖို့ ဝိန်းမြို့ မှာနေတဲ့ မကေခိုင်ဆီ သွားလည်ပတ်တုန်းက ကားမောင်းသင်ပေးဖူးတဲ့ မကေခိုင်မိတ်ဆွေ ကိုဝင်းငယ်နဲ့လေးနှစ်အကြာ မကြာသေးခင်က နယူးယောက်မှာ ပြန်တွေ့ ကြတယ်။ ကိုဝင်းငယ်က စန်းထွန်းတစ်ယောက် သွက်သွက်လက်လက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မူအပြည်နဲ့ယောက်ျားလေးကျနေတာပဲလို့မကေခိုင်ကို ပြောတယ်တဲ့။ အဖေ၊ အမေ၊ မကြီးတို့ခင်းထားပေးတဲ့လမ်းမှာ အဆင်သင့်လျှောက်ရတဲ့ စန်းထွန်းတစ်ယောက် ယူအက်စ်ရောက်မှ အခက်အခဲဒုက္ခတွေကို နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတော့ ကြံ့ ခိုင်လာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ ။ ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူးအတွက် သမီး ပေးစရာမလိုဘူး အဖေတို့ မှာ ပိုက်ဆံရှိတယ် ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်က ကုသိုလ်ယူ ပို့ ပေးတာကို အဖေနဲ့ အမေက ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမဆုံး တပြုံးပြုံး ကြွားမဆုံး ပြောမဆုံး ဖြစ်နေတာကိုလည်း ကျေနပ်မိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်၊ ဂီတတစ်ခုခုကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် တီးတတ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒမပြည့်သေးဘူး။ တရုတ်စာကို နည်းနည်းသိပေမဲ့ ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် မတတ်ဘူး။
တလောက Skechers ဖိနပ်ဆိုင်မှာ တရုတ်မတစ်ယောက်က တရုတ်လားလို့မေးလာလို့တရုတ်မဟုတ်ဘူး၊ မြန်မာ၊ တရုတ်စာကို နည်းနည်းပဲ ပြောတတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လက်ဆွဲပြီး အတင်းဘာသာပြန်ခိုင်းတော့တာပဲ။ ဘူးတွေကို ထိုးပြပြီး ကွိစိကွစိ ပြောနေတာ တစ်လုံးမှ နားမလည်ပေမဲ့ ဒစ်စကောင့်ချခိုင်းတာနဲ့တူပါရဲ့ ဆိုပြီး တစ်ခုဝယ်ရင် နောက်တစ်ခုကို ဒစ်စကောင့် ပေးလား မေးကြည့်တော့ ဒစ်စကောင့် မရှိဘူးတဲ့။ မေးယိုဒစ်စကောင့် (ဒစ်စကောင့် မရှိဘူး) ၊ နီ ယောက် ပန်းမန် ( အကူအညီလိုသေးလား) လို့မေးတော့ ပူးယောက် (မလိုပါ) ရှဲ့ ရှဲ့ တဲ့။ ဝိုင်းလို ပြင်သစ်စာကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်ရေးတတ်၊ အီတလီစကားကို ထမင်းစားရေသောက် ပြောတတ်၊ စပိန်စကားကို အခြေခံအဆင့်လောက် ပြောတတ်ချင်လိုက်တာ။ အိုးအိမ်မဲ့တွေနဲ့မျက်လုံးချင်မဆိုင် ရှောင်တတ်ပေမဲ့ တခါတုန်းက ဘရိုင်ယန်ပန်းခြံက လှေကားတွေပေါ်ကို တွန်းတင်နေတဲ့ အဘွားကြီးတစ်ယောက် တွေ့ ပေမဲ့ ကူညီပေးရမလား မမေးမိဘူး။ Could you please help me လို့တိုးဖျော့ညင်သာတဲ့ အသံကြားတော့မှ သွားကူညီတာ အားပါးပါး တွန်းလှည်းက အလေးကြီး။ ကျေးဇူးတင်စကားဆုိုနေတဲ့ ငွေရောင်ဆံပင်၊ ပိန်ပိန်ပါးပါး၊ အိုးအိမ်မဲ့ပေမဲ့ ညစ်ပတ်မနေတဲ့ အဘွားကြီးကို You are welcome လို့ဆိုပြီး ထွက်လာမိပြီး အတော်ကြာမှ ပိုက်ဆံအကြွေ မပေးလိုက်မိတာ နောင်တရတယ်။
ဘရိုင်ယန်ပါ့ခ်ပန်းခြံနားရောက်တိုင်း ငွေရောင်ဆံပင်၊ တိုးလျညင်သာစွာ စကားဆိုတတ်တဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါး ၊ တွန်းလှည်းတစီးကို တွန်းနေတတ်တဲ့ အဘွားကြီးတစ်ယောက်ကို တွေ့ လိုတွေ့ ငြား ရှာဖွေမိနေဆဲ။ မိုးရွာပြီးစ ညနေခင်းမှာ Dear Passengers, there is big rainbow through the right windows လို့ကြေငြာတဲ့ မီးရထားမောင်းသူ တစ်ယောက်ကို မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေဆဲ။ နေ့ တိုင်း ဒီအချိန်၊ ဒီရထား၊ ဒီအလုပ်၊ ဒီလူတွေနဲ့ သမာရိုးကျဘဝထဲမှာ အပတ်တိုင်း နေရာသစ်တွေဆီ လမ်းလျှောက်ထွက်ဖြစ်လို့မမြင်ဘူး၊ မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာတွေရောက်ဖူး၊ သိကျွှမ်းရတဲ့ မိတ်ဆွေသစ်တွေရဲ့အတွေ့ အကြုံတွေကို နားထောင်ရလို့ဘဝကြီးက ရိုးအီမနေဘူး။ လမ်းလျှောက်၊ တောင်သွားတက်နေတာ မပင်ပန်းဘူးလား အိမ်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး အေးအေးဆေး အနားယူပါလားလို့ပြောကြတယ်။ ကို်ယ့်အတွက်တော့ အပတ်တိုင်း လမ်းလျှောက်၊ တောင်တက်၊ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်နေရတာ အနားယူခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ အဲဒါတွေသာ မလုပ်ရရင် ဘဝကြီးက ပျင်းရိငြီးငွေ့ စရာ ကောင်းနေမှာပေါ့။
ဖေ့ဘွတ်၊ မက်ဆေ့စ်၊ ဂျီတော့၊ ဘလော့ကွန့်မန့်ကနေ မွေးနေ့ ဆုတောင်း တောင်းပေးကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ ကြောင့်သာ မွေးနေ့ ကို အဓိပ္ဗာယ်ရှိတဲ့ စပါယ်ရှယ်ဒေး ဖြစ်စေတာပေါ့။ ဖေ့ဘွတ်အသုံးနည်းလို့မွေးနေ့ ဆုတောင်းဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့တာ၊ ဘလော့တွေမှာ ကွန့် မန့် ပေး၊ ဘလော့မဂင်းနိုင်တာတွေကို နားလည် ပေးစေချင်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလရဲ့နောက်ဆုံးပတ် ကြသပတေးနေ့ က ကျေးဇူးတော်နေ့ ၊ သောကြာနေ့ က ဘလက်ဖရိုင်းဒေး ဈေးအကြီးအဝယ် ဝယ်ကျတဲ့နေ့ ဖြစ်လို့အမေရိကန်တွေရဲ့အားလပ်ရက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်လေးတွေ စတင်ချိတ်ဆွဲ အလှဆင်ကြပြီမို့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ချိန်လို့ တောင် ခံစားမိတယ်။ စာလာဖတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း Happy Thanksgiving ! Happy Holidays ! ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၄။
အန်တီ အိမ်စိုးမေ said...
Happy Birthday ပါ စန်းထွန်းရေ
ခြေရာမချန်ခဲ့ပေမဲ့ စန်းထွန်းရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ပါ
Happy Birthday again နော် sis
ဟုတ်ပါ့၁နှစ်ဆိုတာမြန်လိုက်တာ။အသူလဲမိဘနဲ့ဝေးဝေးနေမှစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်လာမလားမသိဘူး။ခုထိတော့မခွဲနိုင်သေးဘူး။ကြာသပတေးနေ့က thanks giving dayဆိုရင် အသူမွေးနေ့နဲ့တနေ့တည်းကျတယ်။
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ ပေါင်းများစွာပိုင်ဆုိုင်ပါစေလို့ ...
မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ - ၄
ဗာမွန်သွား တောလား - ၂
ဗာမွန်သွား တောလား - ၁